Xawaaladaha Somalida ee Mareykanka oo joojinayo lacagaha ay diraan, maxay tahay sababtu? | Moment Union Somali Diaspora
Minneapolis: 11 December 2011:Xaawaladaha Soomaalida ee ka hawlgala dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaciyey inay joojin doonaan adeegga lacag dirista ee ay u sameyn jireen macaamiisha Soomaalida ee lacagaha u dira eheladooda ku nool Soomaaliya wixii ka dambeeya 30-ka bishan December.
Arintan ayaa ka dambeysay ka dib markii bangiyadii lacagaha la sii marsiin jiray ee Mareykanka laga leeyahay ay sheegeen inay joojinanayaan xisaabaadka shirkadaha Xawaaladuhu ku leeyihiin banfgiyada waaweyn si looga gaashaanto in lacagaha loo wado Soomaaliya ay gacanta u galaan kooxda Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Shirkadda “Sunrise Community Banks” oo markii hore lacagaha xawaaladaha ay diraan la marsiin jiray ayaa sheegtay in sharciyo cusub oo dhowaan ay soo saartay waaxda maaliyada ee dawlada Mareykanka ay cadaadis badan iyo baaritaano badan ku soo rogeen lacagaha loo diro Soomaaliya, si looga hortago in lacagaha loo diro Soomaaliya ay gacanta u galaan xubno ka tirsan argagixisada.
Bangiiyada raba inay lacagaha Soomaaliya u socda ay qabtaan ayaa sidoo kale laga rabaa inay damaanad qaad bixiyaan isla markaana ay qaataan sharciyo kale oo dhaaantood kharash badan ku kacaya kuwaasoo Xawaaladuhu aysan awoodi karin.
Xaawalada Soomaalida ee Mareykanka intooda badan fadhigoodu waxaa uu ku yaalla Minneapolis, waxayna xawaaladuhu hore u qaateen sharciyo dawlada Mareykanka soo saartay kuwaasoo aad loo adkeeyey wixii ka dambeeyey qaraxyadii Mareykanka ka dhacay Sept. 2001.
Masuuliyiinta shirkadaha Soomaalida waxay Raxanreeb u sheegeen in wixii hadda ka horeeyey ay si caadi ah ku socotay hawsha lacag dirista, iyadoo marka lacag loo dirayo Soomaaliya meel ka mid ah qofka diraya la weydiin jiray magaca iyo telefoonka loo diraha oo kaliya.
Shirkadda Sunrise Community Banks ayaa hore u go’aamisay in 15-ka December ay ku eg tahay waqtiga ay joojineyso xisaabaadka shirkadaha xawaalada Soomaalida, laakiin dood dheer iyo wada xaajood ayey ku dartay 15 maalmood oo kaliya taasoo gaarsiin doonta illaa 30-ka December 2011.
Walaaca ugu weyn ee arintan sababay ayaa ka dhashay markii waaxda dembi baarista Mareykanka ay sheegeen in gabdho dhowaan lagu xiray Minneapolis oo Soomaali ah ay qirteen in lacag dhan $8,600 ay u direen ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira DKMG iyo ciidamada AMISOM.
Sidoo kale qof Soomaali ah oo laga soo qabtay San Diego bishan dhexdeeda ayaa qirtay inuu lacag u diray ururka Al-Shabaab.
[Halkan fiiri xeer soo baxay Aprill 2005]
Aadan Xasan oo ah afhayeenka urur ay ku bahoobeen shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida ayaa sheegay in saameynta go’aankan uu deg deg ugu laaban doono dadka Soomaaliyeed ee dalka ku nool kuwaasoo si toos ah ugu xiran biilka ay u soo diraan eheladooda dibadaha ku nool.
“Soomaaliya kama jito bangi, sidaa darteed waxaa kaliya la heli karay waa Xawaaladaha” ayuu yiri afhayeenka oo intaa ku daray “Waa wax dhici kara in dad ay u dhintaan arintan”.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa la qiyaasasayaa in sanadkii ay dalkooda u diraan $100 milyan taasoo ka dhigan in malaayiin ruux oo Soomaaliya ku nool oo aan wax shaqo ah heysan ay si toos ah ugu xiran yihiin biilka uga yimaada dibadda.
“Aniga aabahay oo geel ku haysta miyiga ayaam bil kasta u diraa $200 haddii ay xawaaladuhu xirmaana way adkaan doontaa noloshiisa” sidaasi waxaa yiri wiil Soomaali ah oo ku nool Mareykanka.
Sida ay qabaan dadka arimahan la socda weli xalku wuu adag yahay.
One thought on “Xawaaladaha Somalida ee Mareykanka oo joojinayo lacagaha ay diraan, maxay tahay sababtu?”
Franklin Bank oo Joojiyey xiriirkii kala dhexeeyay Xawaaladaha Soomaaliyeed ee Gobolka Minnesota
Khamiis, December 01, 2011 (Union Community) − Franklin Bank oo Xawaaladaha Soomaalida ay ku lahaayeen akoonnada ayaa ku wargeliyay xawaaladaha Soomaalida inuu joojiyay xiriirkii kala dhexeeyay uuna xirayo akoonnada ay ku leeyihiin, iyadoo bankigan uu yahay midka keliya ee ay xawaaladaha Soomaalidu isticmaali jireen.
Mas’uuliyiinta Bankigan oo xaruntiisu ay tahay gobolka Minnesota oo ay daggan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Mareykanka ayaa madaxda xawaaladaha ula kulmay mid-mid iyagoo siiyay warqado ay ku qoran yihiin in 15-ka December la xirayo akoonnada ay ku leeyihiin bankiga.
Arrintan ayaa waxay walaac xooggan gelisay mas’uuliyiinta xawaaladaha dalka Mareykanka, iyagoo billaabay inay Soomaalida ku nool dalka Mareykanak ay ka la kulmaan senetarada laga doorto gobollada ay ku nool yihiin si cadaadis loogu saaro in bankiga uu ka laabto go’aanka uu ku xirayo akoonnada xawaaladaha Soomaalida.
Xawaaladaha Soomaalid ayaa waxay akoonnada bankiga Franlkin u isticmaali jireen inay lacagaha ay u dirayaan Soomaalida sii marsiiyaan, waxaana lacagta inta badan ay ku dhici jirtay xafiisyada ay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta, halkaasoo ay uga sii gudbi jirtay Soomaaliya iyo dalalka kale ee bariga Afrika.
Warbixin laga soo xigtay Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in sannad walba ay dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool u diraan eheladooda Soomaaliya ku sugan lacag ka badan hal bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Bankiyada Mareykanka sida US Bank, TCS Bank iyo kuwo kale ayaa horay u joojiyay xiriirkii ay la lahaayeen xawaaladaha Soomaalida, iyadoo bankigan uu noqonayo kii ugu dambeeyay oo joojiya xiriirka xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka.